WinRAR 5.50 beta ကို2(x86 / x64) အိတ်ဆောင်က Universal Crack 2018
နေအိမ် » ရိုက်သံ & active » WinRAR 5.50 beta ကို2ရိုက်သံ
WinRAR 5.50 beta ကို2ရိုက်သံ
အားဖြင့် Anastasiya Libra | ဒီဇင်ဘာလ 7, 2017
နောက်ဆုံးရ Winrar အပြည့်အဝ Crack အခမဲ့ Serial Keys ကို
Winrar အပြည့်အဝ Crack အခမဲ့အဘို့အ Download 32/64 နောက်ဆုံးပေါ် Serial Key ကိုအတူနည်းနည်း 2017 – Software ကို active. Winrar အပြည့်အဝ Crack အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကိုသူတို့ရဲ့ PC ကိုအတွက်မော်ကွန်းတိုက်ဖန်တီးခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်းအသုံးပြုသူများအတွက်အားကောင်းတဲ့ utility ကိုဖြစ်ပါတယ်, မျိုးစုံအသုံးဝင်သော features တွေတစ်အကွာအဝေးင်. WinRAR အပြည့်အဝအက်ကွဲမောက်စ်နဲ့ menus တွေအသုံးချဖို့တစ်ဦးအပြန်အလှန်ဂရပ်ဖစ် interface ကိုထို့အပြင်က command line interface တွေကိုရှိပါတယ်. Download Winrar အပြည့်အဝ Crack အခမဲ့ 64-bit နဲ့အက်ကွဲအသုံးပြုသူများအ AES ကိုသုံးပြီးစက်မှုလုပ်ငန်းအစှမျးသတ်တိ archive ကိုစာဝှက်စနစ်ရဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအကျိုးကျေးဇူးကမ်းလှမ်း (Advanced Encryption Standard) တစ်သော့ချက်နှင့်အတူ 128 -bits. Winrar ကြိုတင်အထိဖိုင်တွေနဲ့မော်ကွန်းတိုက်ထောက်ခံပါသည် 8,589 အရွယ်အစား billion gigabytes. Winrar အပြည့်အဝ Crack အခမဲ့လည်း Self-ထုတ်ယူမှုနှင့် multivolume မော်ကွန်းတိုက်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကမ်းလှမ်း Download. ပြန်လည်နာလန်ထူစံချိန်နှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး volumes ကို၏အကူအညီနှင့်အတူ, အသုံးပြုသူများသည်လည်းတောင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးသွားသောမော်ကွန်းတိုက်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အတွက်နိုင်ပါတယ်. Install ကားမောင်းသူ Toolkit ကို Cracked ယာဉ်မောင်းသူအပေါင်းတို့အမျိုးအစားကို update များအတွက်.
Download Winrar အပြည့်အဝ Crack အခမဲ့အထူးများ၏ထို့အပြင်နှင့်အတူတခြား Archive software ကိုထက်ကိုသုံးပါနှင့်နားလည်ရန်အတော်လေးလွယ်ကူသည် “Wizard ကို” မေးခွန်းအဖြေကိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအင်္ဂါရပ်များမှတဆင့်အခြေခံသိမ်းဆည်းလုပ်ဆောင်ချက်များကိုမှချက်ချင်း access ကိုပေးသော mode ကို.
WinRAR 5.50 Software ကိုအံ့ဖွယ်အင်္ဂါရပ်များအပြီးတွင်ပြီ
အဘိုးမဖြတ်နိုင်သော & Virus ကိုအခမဲ့ – WinRAR အခမဲ့ & ဘေးကင်းလုံခြုံဒေါင်းလုပ်!
WinRAR နောက်ဆုံးဗားရှင်း! – အဘို့အ Winrar v5.5 အပြည့်အဝ Crack 32/64 bit နဲ့
Windows နဲ့အကျင့်ကိုကျင့် 10 64 နည်းနည်း / 32 bit နဲ့ဗားရှင်း!
အားလုံးအခြားသူတွေကို Windows ဗားရှင်းတွေနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့
အသုံးပြုသူများသည်ရှေးခယျြမှု: အခမဲ့ WinRAR Download လုပ်ပြီးအောက်ပါ Get,
အကွိမျမြားစှာကို formats ကမ်းလှမ်း – Winrar အားလုံးလူကြိုက်များနှင့်ထိုက်တန် archive ကိုကို formats ထောက်ပံ့ (RAR, ZIP ဖိုင်, အငှားကား, ARJ, LZH, ACE အား, TAR, GZip, သစ်, ISO ကို, BZIP2, နှင့်, နှင့် 7-Zip) ဒါဟာအစတစ်ချုံ့အချိုးအစားရှိပါတယ် 8-15% အခြားသိမ်းဆည်း software ကိုထက် သာ. ကောင်း၏
ဒါဟာအစတစ်ချုံ့အချိုးအစားရှိပါတယ် 8-15% WinRAR compressed file ကိုအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်နှင့်အလိုအလျှောက်၎င်း၏ထုပ်ပိုးတဲ့နည်းလမ်းကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်အခြားသိမ်းဆည်း software ကိုထက် သာ. ကောင်း၏
Winrar compressed file ကိုအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်နှင့်အလိုအလြောကျထို့အပြင်၎င်း၏ထုပ်ပိုးတဲ့နည်းလမ်းကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်; ဒါကြောင့် 128-bit နဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏စွမ်းရည်ရှိပါတယ်
ထို့အပြင်, ဒါကြောင့် 128-bit နဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးဝင်းရှားပါးဆော့ဖျဝဲများ၏စွမ်းရည်ကို၎င်းတခုတခုအပေါ်မှာအီလက်ထရောနစ်လက်မှတ်ကိုထည့်လေ့မရှိဖြစ်ပါတယ် ဖြစ်စဉ်ကိုအောက်မှာဖိုင်တွေ; ဤအအမည်များကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်မှသူတို့ကိုလျှို့ဝှက်နှင့်ပိုပြီးကာကွယ်စေ.
WinRAR software ကိုဖြစ်စဉ်ကိုအောက်မှာမှတ်တမ်းများတခုတခုအပေါ်မှာအီလက်ထရောနစ်လက်မှတ်ကိုထည့်လေ့မရှိ; ဤအတံဆိပ်ခေါင်းများခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်မှသူတို့ကိုလျှို့ဝှက်နှင့်ပိုပြီးကာကွယ်စေ.
မရင့်ဒီအားလုံးဖြစ်ပါတယ်; ဒါကြောင့်လည်းအကူအညီတောင်းအသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦးထက်ပိုအဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝလမ်းအတွက်မော်ကွန်းတိုက်ဖန်တီးသို့မဟုတ်စီမံခန့်ခွဲရန် features also.These အံ့ဘွယ်သောစုံ features တွေရှိပါတယ်. WinRAR 5.50 အပြည့်အဝအက်ကွဲပညာရှင်ပီသစွာသူတို့ကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေနိုင်သည်သမျှထူးခြားတဲ့အားသာချက်များပါဝင်ပါသည်. အားလုံးအသုံးပြုသူများသည်တစ်ချိန်ကမိမိတို့၏ PC မှာ Download ပြုလုပ်နှင့်တစ်ဦးပါပေးရမည်ဆိုသောကြောင့်ရာ. Winrar အပြည့်အဝ Crack အခမဲ့လည်းရှားပါးအနိုင်ရရှိ application ကိုမသုံးဘဲကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ် Download, သငျသညျကွန်ယက်ကနေအများဆုံးစာသားကိုစာရွက်စာတမ်းများကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးဖွင့်လို့မရဘူး, သူတို့အများစု၏ပုံစံထဲမှာသိမ်းထားပါတယ်အဖြစ် “RAR ။”
ဘယ်လိုသုံးပါရန် & အဆင့်မြင့် Winrar Crack 5.50 ဆော့ဖျဝဲ
ပေးထားသောခလုတ်ကိုအားဖြင့်အဆင့်မြင့် Winrar software ကိုအက်ကွဲ pack ကို Download လုပ်ပါ.
ထိုထုတ်ယူ tool ကိုအားဖြင့် folder ကို Extract.
အဆင့်မြင့်ဝင်းကရှားပါး Crack ဖိုင်တွဲကိုဖွင့်ပြီး asosetup.exe install
သင်၏ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုအဆက်ဖြတ်လိုက်ပါ & software ကိုတပ်ဆင်ခြင်းသည် directory ထဲတွင်အက်ကွဲ file ကို paste.
သင့် system ကို restart လုပ်ပါ; အသုံးပြုရန်ဖို့အဆင်သင့်ဖွင့်.
WinRAR အခမဲ့ Download လုပ်များနှင့်ခံစားကြည့်ပါ!
WinRAR Download 5.50 beta ကို2ရိုက်သံ
← Adobe က Photoshop ကို CC ကို Crack quick စုစုပေါင်းလုံခြုံရေး Crack အနာ →